Nuur Cadde iyo Cabdi Qaasim Salaad Xasan oo la filayo inay shir wad qaataan | maakhir.com
Nuur Cadde iyo Cabdi Qaasim Salaad Xasan oo la filayo inay shir wad qaataan
Bosaaso:- Wararka hoose oo haatan naga soo gaadhaya magaalada Caasimada ah ee Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in aad loogu rajo wayn yahay inay Kulmaan Raisalwasaare Nuur Cadde iyo Madaxwaynihii Hore ee Dawlada Carta ee Bur Burtay Cabdi Qaasim Salaad Xasan, waxana la sheegay inuu kulankaasi ka dhicidoono Guriga Cabdi Qaasim ee magaalada Muqdisho.
Kulanka Raisalwasaare Nuur Cadde iyo Cabdiqaasim ayaa lafilayaa in ay diirada ku saarayaan ,sidii loo hagaajin lahaa nabadgalyada gobalka Banaadir isla markaana uu gacan uga siin lahaa Xukuumada dowlada Cabdiqaasim arimaha ku aadan nabad ku soo celinta Magaalada Muqdisho, kulankooda ayaa sidoo kale waxay ku soo qaadanayaan sidii loo bilaabilahaa dibu hashiisiin lakala dhex dhego Dawlada Somaliya iyo kooxaha dagaalka ka wada Gudaha Caasimada Somali.
Kulan Nuur Cadde iyo Cabdi Qaasim ayaa waxa uu horseedayaa in Dawlada Somaliya iyo kooxaha Dagaalka kula jira laysu soo dhaweeyo Madaama Cabdi Qaasim inta badan farta lagu qaloociyo inuu wax wayn ka og yahay Rabshadaha ka oogan gudaha Caasimada Somaliya ee Muqdisho,taasi oo sabab looga dhigayo ka gadaal goortii ay Bur Burta Dawlada uu hogaamin jiray ee Carta ayna caqabadu badan kala kulan tahay socodsiinta hawliheeda.
Dadka odaraseeya arimaha siyaasadeed ee Dalka Somaliya ayaa kulankaas ay yeelan doonaan Raisalwasaare Nuur Cadde iyo Cabdi Qaasim waxay ku tel maamayaan mid keeni karta usu soo dhawaan sho laga dhex abuurayo Dawlada Somaliya iyo Kooxaha ka soo horjeeda.
Si kastaba xaalku ahaadee Raisawasaare Nuur Cadde aya magaalada Muqdisho gaadhay maalintii shalay isaga oo ka soo Booqlay magaalada Baydhabo ee Xarunta Baarlamaanka Somaliya,waxana uu sheegay inuu socdaalkiisu salka ku hayo u kuur galida Xaalada Magaalada Muqdisho.
« Wafti balaadhan oo ka socda Dalka Emaaraadka ayaa soo gaadhay Gobolada Puntland
Maalinta Saxaafada Somaliya oo Muqdisho maanta laga Xusay »